Izindaba - Ukumbozwa kodonga lwe-PVC kungaba kuhle kakhulu!
Kusukela ezikhathini zasendulo, ukufuna kwesintu “ubuhle” akukapheli. Ngasekupheleni kweNkathi Ephakathi kuze kube sekuqalekeni kwekhulu le-18, izicukuthwane zaseSweden nabathengisi abacebile baqala ukusebenzisa okokumboza odongeni njengemihlobiso yangaphakathi. Izitayela bekungukumbozwa kodonga lwe-cashmere, ukumbozwa kodonga lwaseGobelin, nokwakhiwa. Ukumbozwa kodonga lwesikhumba, ukumbozwa kodonga lwe-velvet satin, njll., Ukukhombisa ubunikazi babo. Kamuva, izembozo zodonga ezilingisiwe (izindwangu zikakotini) zaduma phakathi kwezakhamizi zaba yintukuthelo enkulu.
Kulezi zinsuku, ngokuqhubeka okuqhubekayo kobuchwepheshe bokukhiqiza, izinhlobo zokumbozwa kodonga lodonga ziyaqhubeka nokwanda. Ngomsebenzi wayo we-flame retardant, antibacterial, isikhutha, okungangenisi amanzi nokuvimbela uketshezi, izindwangu zodonga lwe-PVC zivumelaniswa kakhulu nezidingo zezindawo ezahlukahlukene futhi zihlangabezana nezidingo zabantu banamuhla Izidingo ezingokoqobo zesakhiwo zakha indawo efudumele, enethezekile nenempilo yabantu , engenakuqhathaniswa nezinye izinto zokuhlobisa udonga.
Kodwa-ke, abanye abantu benza ihlaya bathi ukumbozwa kodonga lwe-PVC akukwazi ukuba "yimfashini" yezindonga, ngoba umbono womphakathi wokuqala wokumbozwa kodonga lwe-PVC ukusebenza kwayo.
1. "Okuyingqayizivele" kwesembozo sodonga lwe-PVC
Imibala enemibala emithathu kanye nosayizi ophezulu wokugcwala okhiqizwe ngogqoko lwodonga lwe-PVC ayiqhathaniseki ngendwangu yendwangu eboshiwe yendwangu namaphepha odonga. Izindwangu zodonga lwe-PVC zingahlanganiswa namaphethini amahle anezinhlangothi ezintathu namaphethini anemibala ukudala indawo eyisicaba. Umphumela obonakalayo isembozo sodonga esingeke sifinyelele kuwo
Ukumbozwa kodonga lwe-PVC kugoqwa ngama-roller, angaxuba amaphethini ahlukile, izinto ezihlukile, nemibala ehlukene. Uma kuqhathaniswa nokumbozwa kwodonga okukodwa okwenza izinguquko emaphethini kuphela, ukumbozwa kodonga lwe-PVC kungaveza ukwakheka okunothile nemiklamo, amahhotela amaningi aphezulu azokhetha ukumbozwa kodonga lwe-PVC njengezinto zokuhlobisa udonga.
2. Isembozo sodonga se-PVC "singagcina ubusha ingunaphakade"
Umuzwa wokuqala ubalulekile, kepha okubaluleke kakhulu ukuthi ungabugcina kanjani lobu "buhle". Esikhathini ngemuva kokuba ukwakhiwa kuqediwe, ukumbozwa okuningi kodonga kuzoba nezinkinga njengokuguga kwempahla nokuguqulwa kombala. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zokumbozwa kodonga, ukumbozwa kodonga lwe-PVC, amafilimu ahlanganisiwe e-PVC angagcina kangcono "ubusha", noma ngabe sekudlule isikhathi eside sokusetshenziswa, asenemibala egqamile yangempela nokuthungwa okugqamile. Ibuye inezinzuzo zokungangenwa ngamanzi, i-antifouling, nokuhlanza amanzi
3. Isimbozo sodonga se-PVC sifanele izimo eziningi
Amahhotela amaningi, izindawo zokuzijabulisa, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela kanye nezakhiwo zamahhovisi ngokuyisisekelo zikhetha ukusebenzisa ukumbozwa kodonga lwe-PVC ukuhlobisa udonga lwangaphakathi. Abanye onjiniyela baze bathengise izindawo zokuhlala ezisezingeni eliphakeme, amafulethi, nezakhiwo zamahhovisi ngemuva kokuthi zihlotshiswe ngezembozo zodonga lwe-PVC.